ပုံဆွဲစကေး 1: 0.25 0.5 1 1.523 4
အ pad ပါ၏အထူ B
projection ခြေလှမ်းများ F
notation အရွယ်အစား monolithic ကွန်ကရစ်လှေကား
X - လှေကားရဲ့အရှည်
W - လှေကားရဲ့ width.
A - ပလက်ဖောင်း၏အရှည်. သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလှေကားကစားကွင်းများကိုမပါဘူးဆိုရင်, ပလက်ဖောင်းရဲ့အရှည် ထား. = 0.
В - အ pad ပါ၏အထူ။
Z - နောက်ထပ်အထူ။ သာလှေကားများ၏ဂန္ထဝင်အမျိုးအစားထဲမှာအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွား။
F - စီမံကိန်းကိုအဆင့်။
G - အဆင့်များ၏အထူ။ ထိုဂန္စတိုင်လှေကားခုနှစ်တွင် protrusion ၏အထူအဖြစ်အသုံးပြုသည် F.
monolithic လှေကား Reinforcement ။
အင်အားဖြည့်ပုံမှန်အားဖြင့်သာအမျိုးအစား 1 monolithic လှေကားအတွက်အသုံးပြုသည်။